‘लभ स्टेशन’को ट्रेलर सार्बजनीक (भिडियो सहित) — Bhugolnews
‘लभ स्टेशन’को ट्रेलर सार्बजनीक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । ‘लिली बिली’ जोडी अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङ अभिनित नयाँ फिल्म ‘लभ स्टेशन’ २२ चैतबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा निर्माण युनिटले मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ ।
क्युज चलचित्र भवनमा आयोजित आयोजित ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदीप, जसितासहित फिल्मका धेरै युनिट उपस्थित थिए । फिल्मको ट्रेलरमा भने प्रदीप र जसिताको प्रेममा अभिनेता प्रकाश शाह बाधक देखिएका छन् । जसिता र प्रकाश बीचको विवाहको तयारी समेत देखाइएको ट्रेलरले प्रदीप र जसिताको प्रेमले कुन रुप लिन्छ भन्ने कौतुहलता जगाएको छ ।
कार्यक्रममा अभिनेता प्रदीपले अग्रज निर्देशक उज्वल घिमिरेसँग काम गर्दाको अनुभव साटे । उनले लभ स्टेशनमा राम्रो काम गरेको दाबी गरे ।
अभिनेत्री जसिताले ‘लभ स्टेशन’सम्म आईपुग्दा आफ्नो काम अझ परिपक्क भएको बताइन् । उनले फिल्मबाट आफु थप उत्साहित भएको र आउँदा दिनमा प्रदीपसँगै अरु अभिनेताहरुसँग समेत काम गर्न इच्छुक रहेको बताइन् ।
यही चलचित्रबाट खल भूमिकामा डेब्यु गरेका प्रकाश शाहले पनि राम्रो टिम पाएका कारण लभ स्टेशनमा आफुले खुलेर काम गर्न पाएको अुनभव सुनाए ।
लभ स्टेशनका निर्देशक उज्वल घिमिरेले नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरेर आफुहरुले समकालीन पुस्ताका लागि फिल्म तयार गरेको बताए । प्रदीप र जसितासँग काम गर्दा यी दुई कलाकारले आफुलाई पूर्ण साथ निकै रमाईलोसँग सुटिङ सम्पन्न भएको बताए ।
संगीतकार शम्भुजित बासकोटाले त बलिउडका उत्कृष्ट लभ स्टोरी फिल्मकै लेवलको चलचित्र लभ स्टेशन बनेको बताए । उनले यो फिल्म हिट हुने सिमेत दाबी गरे ।यो चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता गोविन्द शाहीले आफ्नो होम प्रोडक्सन काफिया फिम्स्ले लभ स्टेशनलाई राम्रो बनाउन कुनै कम्प्रमाईज नगरेको बताए ।
फिल्ममा प्रदीप र जसितासँगै रमेश बुढाथोकी, प्रकाश शाह, रेशु भट्टराई, विनोदकुमार पौड्याल, प्रिया रिजाल, सरु बिष्ट, रवि डंगोल, दिनेश काफ्ले, कालु रानासहितको अभिनय यसमा छ ।
लभ स्टेशनलाई काफिया फिल्मस्को व्यानरमा काफिया शाही (क्रिसु) र कविरबिक्रम शाहीले निर्माण गरेका हुन् । आलोक शुक्लाको छायाँकन रहेको लभ स्टेशनमा शम्भुजीत बासकोटा, दीपक शर्मा, राजनराज शिवाकोटी र एलिश कार्कीको संगीत छ ।
शिशिर खातीको नृत्य निर्देशन, कुमार महर्जनको द्धन्द्ध निर्देशन, राजेन्द्र रावलको निर्माण व्यबस्थापन रहेको फिल्मलाई निर्देशक घिमिरे र सुवाससिंह बस्न्यातले लेखेका हुन् ।
२०७५ फागुन २२ गते प्रकाशित
भुसन राइकाे ‘मरुभुमी’ सार्वजनिक (भिडियो)
‘ए मेरो हजुर ३’को पहिलो गीत ‘जिन्दगी नै भन्दिन’ सार्वजनिक (भिडियो)
‘दाल भात तरकारी’को शीर्ष गीत रिलिज
भिकारीको ‘पञ्चामृत’ सार्वजनिक (भिडियो )
चैत्र ८ मा ‘प्रेमलिला’, यस्तो छ ट्रेलर (भिडियो)
चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को तेश्रो गीत सार्वजनिक (भिडियो)
मानवसेवा आश्रमलाई प्रदेश सरकारको ५ लाख
वीरगञ्ज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मावन सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखाको भवन निर्माणका...
शहीद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा
मकवानपुर । दोस्रो संस्करणको भूगर्भ सिमेन्ट शहीद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता–२०७५ को तयारी सम्पन्न भएको छ...
होली खेल्ने क्रममा बानेश्वरमा खुकुरी हानाहान, दुई जना घाइते
काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वर चोकमा होली खेल्ने क्रममा विवाद हुदाँ खुकुरी हानाहान भएको छ। झडपको...
बाहुबली निर्देशकको “आरआरआर”
काठमाडौँ । तेलुगु भाषामा लगातार ‘मगधीरा’, ‘मख्खी’ र ‘बाहुबली’ का दुई भाग निर्देशन गरेर बलिउडमा...
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम भोलिदेखि, पहिलो सेयर प्रधानमन्त्रीले किन्दै
काठमाडौं । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ पहिलो चरणमा...
मेगा बैंकको हेटौंडा शाखामा २९ लाखको काण्ड !
भोली विप्लव नेकपाको नेपाल बन्द, अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने इन्चार्ज ज्वालाको चेतावनी
दुर्घटनामा आमाको मृत्यू भएपछि चुरेहिल अस्पतालमा १२ महिने बालक अलपत्र
आज विप्लवको नेपाल बन्द, थाहामा ट्रक जलाइयो
विवाहको दिन छोरीले दुलहासँग विवाह गर्न नमानेपछि आमा नै बनिन् दुलही
मेलामा कुहिएको र अखाद्य वस्तु छ्याप्छ्याप्ती, दुई वटा स्टल बन्द, म्याद सकिएका सामान जफत
दुलहा आए, दाइजोमा १ रुपैयाँ लिए र हेलिकोप्टरमा दुलही राखेर बिदा भए
के के छन् सरकारले सिके राउतसँग गरेका सहमतिमा ? (पूर्ण पाठ)
‘डिएसपीले हतियार देखाएर गोली हान्दिन्छु’ भनेपछि….
सिंहदरबार वडामै आइपुगेन कसरी जनतामा पुग्नुः वडाअध्यक्ष दीपक खड्का
Tweets by Bhugol News
ITI Media Pvt.Ltd द्वारा सञ्चालित भूगोल न्यूज डटकम नेपालको लोकप्रीय डिजिटल पत्रिका हो ।
हामीले खोजमुलक खबरहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हरेक समाचार र विश्लेषणलाई समेट्दै आएका छौँ ।
नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि भूगोल न्युजलाई समाजसँग प्रत्यक्ष जोड्न हामी अहोरात्र खट्ने छौँ ।
Copyright © 2017-2019 BhugolNews | Powered By EasySoftnepal